Mpitoraka bilaogin’ny herinandro: Haute Haiku avy any Kenya · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Aogositra 2009 20:18 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 简体中文, 繁體中文, Español, polski, English
Anankiray amin'ireo mpitoraka bilaogy vao vaovaon'ny Global Voices aty amin'ny faritra atsimon'i Sahara i Haute Haiku. Miresaka momba ny vavy tia vavy na lahy tia lahy, ny samy tiana na lahy na vavy ary ny miova fitaovam-pananahana (LGBT) ao amin'ny tontolon'ny bilaogy aty Afrika izy, tafiditra am'izany koa ny fifindran'ny tsimok'aretina VIH ao amin'ireo lahy miray amin'ny lahy, ary ny fomba ifandraisan'ny hafa azy ireo any amin'ny faritra andrefan'i Afrika. Mitoraka bilaogy amin'ny maha lahy tia lahy azy aty Afrika koa i Haute ao amin'ny bilaoginy manokana, Single gay life in Kenya (fiainan'ny pelaka mpitovo any Kenya).
Any amin'ny faritra maro aty Afrika atsimon'i Sahara dia heloka mahavoasazy ny homosexualité (mahapelaka) ka miainga amin'ny fandoavana lamandy ka hatramin'ny figadrana an-taonany maro na mandrapahafaty. Araka ny voalazan'ny International Gay & Human Rights Council(Fikambanana iraisam-pirenena miaro ny zon'olombelona sy lahy miray amin'ny lehilahy) dia 2/3 ny firenena afrikana no mametraka lalàna manameloka ny firaisan'ny mitovy taovam-pananahana, ary iharan'ny herisetra sy ny fanavakavahana ny olona tahaka izany manerana ny kaontinanta manontolo.
Na dia mihamalalaka ho an'ny pelaka aza ny miaina any Kenya araka ny tatitra dia misy ihany lalàna milaza fa ny pelaka lehilahy (fa tsy vehivavy) dia azo gadraina hatramin'ny 14 taona. Any amin'ny firenena toa an'i Kenya, Uganda, na Tanzania dia efa hatramin'ny andron'ny fanjanahan-tany no nisy izany lalàna izany, raha toa kosa ka vao tamin'ny volana aprily tamin'ity taona ity no natao ny lalàna manasazy ny pelaka tany Burundi.
Vokatr'izany dia pelaka maro manerana an'i Afrika no miaina anatin'ny tahotra sao dia tratra ny maha pelaka azy. Vitsy ihany ireo mampiasa ny bilaogy miezaka mampiely ny tokony hahazakan'ny rehetra ny pelaka sy ny maha-izy azy ireo.
Ahoana ny nanombohanao nanoratra ho an'ny Global Voices?
Nahazo mailaka avy amin'i Ndesanjo Macha ilay mpanoratra aty amin'ny faritra atsimon'i Sahara nanontany aho raha afaka miresaka ny momba ny LGBT aho, rehefa nieritreritra aho dia hoy aho hoe maninona moa? Tsy narisika ihany aho tamin'ny voalohany nieritreritra fotsiny hoe mpanoratra mahay firy no efa nandà talohan'ny niantsoany ahy.
Inona no nahatonga anao hirona amin'ny fanoratana ny momba ny LGBT?
Mahazatra ahy ny mamaky ny bilaogin'ny olona an-dalana hianatra rehefa tratran'ny fitohanan'ny fiara. Hoy aho hoe: izaho koa mahavita toy izao. Amin'ny ankapobeny dia tiako ny mihaona amin'ny olona tiako halaina tahaka, ary rehefa nanomboka nanoratra aho dia nivoady tsy hanoratra resaka fankahalana, tahotra, na zon'ny pelaka. Fa ny fiainan'ny pelaka amin'ny ankapobeny ihany; ny antony maha irery anay, ny fifanaovana fotoana sy ny sisa. Fanakianana mankahala pelaka nataon'ireo lehibe ao amin'ny fanjakana no nahatonga izany rehetra izany. Nanapan-kevitra aho hoe tsy ekeko intsony ny tsy fahalalàna ny tia mitovy taovam-pananahana aminy.
Azonao atao ve ny mampiavaka ny tontolon'ny bilaogin'ny LGBT afrikana?
Mihamivoatra. Isan'andro dia misy karazan'olona maro mipoitra: tanora, antitra, mifangaro. Misy karazana bilaogy hafahafa efa ho 20 eto Kenya ary maro amin'izy ireo no velona tsara. Samy manana ny finoany ny tsirairay. Misy ny mino fa tena “gene” no mahatonga ny fisian'ny LGBT ny sasany, Misy ny mitety ny hetsika rehetra misy fitakian-jo ataon'ny pelaka… Ao koa ireo mihevitra fa tsy voatery ho sarimbavy akory izy ireo vao mety ho pelaka. karazana fahasamihafana daholo izany.
Inona no olan'ny LGBT afrikana tianao ampitaina ho an'izao tontolo izao?
Ny mariazin'ny pelaka aloha etsy andaniny, azoko ambara fa fananahana voaaro sy mirindra. Hatramin'ny nisian'ny fironam-piraisana ara-nofo samihafa ka misy mpitondra afrikana sasany tsy manaiky an'izany, dia tokony asiana ny fanentanana hiarovana ny (lehilahy manambady lehilahy). Zavatra mampalahelo ny tsy fanekeny io rehefa hodian-tsy hita izany, dia hiharihary eo anoloan'ny masony ihany. Akaton'izy ireo ny toeram-pitsaboana sasany, ary izay mbola misokatra tsy azon'ny pelaka idirana. Te hanampy ny mpiasa, kanefa lazain'ireo mpanao politika fa tsy misy toerana ho an'ny pelaka aty Afrika.
Fitenim-pirenena firy no hainao? Inona no nahatonga anao hitoraka bilaogy amin'ny teny anglisy?
Anankiroa: Anglisy sy Swahili, ary angamba telo miaraka amin'ny fitenin-dreniko. Heveriko fa olona maro no mitoraka bilaogy amin'ny teny anglisy aty Afrika andrefana, ary mahazo mpamaky betsaka izy ireo vokatr'izany.
Inona no ataonao rehefa tsy mitoraka bilaogy? Inona no zavatra tianao na fialambolinao?
Mbola mianatra aho, mianatra momba ny fitantanana. Ny zavatra tena tiako dia ny mampiasa ny slam, miteny amin'ny fiteny poetika.
Afaka jerenao eto ny soratra rehetra nosoratan'i Haute ho an'ny Global Voices .